Ukuphupha ngePfau Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Itsala umdla womntu wonke, le ntaka intle inoboya bayo obuhle, inokuthi ijike ibe livili. Yeyona peacock iblue, ethi yona ivele e-India, kodwa igcinwe nakwamanye amazwe amaninzi ngenxa yobuhle bayo. Ipateni yeentsiba ezinkulu zomsila ifanisa amehlo akhazimlayo kuyo yonke imibala kwaye enzelwe ukoyikisa iintshaba. Ukongeza, inkundla yamadoda ngamabhinqa enxibe iimpahla zawo ezintle.
Iipropathi zobuthixo zachaphazeleka kwintsiba yepikoko ngenxa yokubonakala kwayo okuhle, phakathi kwezinye nguJohann Wolfgang von Goethe. Kwangelo xesha, ipikoko ithathwa ngokuba "iluhlobo" olulilize olwenza ubuhle bayo buziphelise kwaye kubonakala ngathi ihlala itsalela ingqalelo kwiintsiba zayo ezintle. Ngenxa yoko, ngokubanzi itolikwa njengophawu lwephupha.
Apha uya kufumana iingcebiso eziluncedo malunga nokutolika iphupha lepikoko. Apha ngezantsi siqokelelele amaphupha akho aqheleke kakhulu ngokunxulumene nepikoko. Oku kulandelwa kukutolika ngokubanzi, ngokwengqondo nangokwasemoyeni kweli phupha:
1 Isimboli yephupha «ipikoko» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Bona ipikoko, kutheni ndiphupha ngaye?
1.2 Iliso lepikoko-nalo lihle kwihlabathi lamaphupha!
1.3 Yenza ntoni ipikoko ephupheni?
1.3.1 Ipikoko ebhabha ibonakala kum emaphupheni am
1.3.2 Ipikoko iphupha iyafa, oh hayi ...
1.3.3 Ukudanisa ipikoko-ipati ephupheni!
1.3.4 Ndiphupha uhlaselo lwepikoko: Qaphela!
1.4 Ipikoko emhlophe kunye nokuchazwa kwamaphupha.
2 Uphawu lwephupha «ipikoko» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ipikoko» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ipikoko» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «ipikoko» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Bona ipikoko, kutheni ndiphupha ngaye?
Ukubona ipikoko ephupheni kunokuba nezizathu ezahluke ngokupheleleyo. Ke, iphupha liyalumkisa, phakathi kwezinye izinto, ngomtshato, eyona njongo yayo kukuphucula imeko yezemali. Ngokubanzi, ukuphupha akufuneki kuhambise iinzame zakho ngokukodwa ekufumaneni imali.
Iliso lepikoko-nalo lihle kwihlabathi lamaphupha!
Iliso lepikoko lichaza zombini ibhabhathane kunye namehlo afunyenwe kwiintsiba zepikoko kumsila wepikoko. Ukuba umfazi uphupha iliso elinjalo kwintsiba yepikoko, umcimbi wephupha uyamlumkisa malunga neqabane elingalunganga, anokuzibandakanya nalo. Kungakhathaliseki isini sephupha, iphupha limele ukukhohlisa el mundo yomlindo.
Yenza ntoni ipikoko ephupheni?
Ipikoko ebhabha ibonakala kum emaphupheni am
Xa ipikoko ibhabha ephupheni lethu, isenza ukuba siqonde ukuba akufuneki sibeke inkululeko yethu engozini ngokukhohlisa kunye nezenzo ezingalunganga. Ukongeza, ipikoko ephaphazelayo ifanekisela umnqweno wokwamkelwa ngokwesondo, kodwa, kodwa, ongenakufezekiswa ngokuzimela.
Ipikoko iphupha iyafa, oh hayi ...
Ukuba ipikoko iswelekile kwilizwe lamaphupha, oku kubonisa inqanaba elitsha lobomi, elinokuba nethemba. Kumfanekiso wephupha ukufa Ukusuka kwipikoko, kuxhomekeke kwimeko yamaphupha ngokwawo, ukoyisa inkohliso kunye namampunge kuyabonakala, oku kungakhokelela kwinqanaba elitsha ebomini.
Ukudanisa ipikoko-ipati ephupheni!
Kutoliko jikelele lwamaphupha, ukudanisa kuhlala kunxulumene nokukhupha into. Ukuba ipikoko edanisayo ivela ephupheni, emva kwayo kukho ukukhutshwa koxinzelelo lwangaphandle. Ngaba amaxabiso angaphakathi adlale indima ebaluleke kakhulu kuwe kutshanje?
Ndiphupha uhlaselo lwepikoko: Qaphela!
Nabani na ophupha ngohlaselo lwepikoko, ngexesha apho ipikoko ibonwa ihlasela, kufuneka azibuze ukuba ingaba bayoyika na into ekwinyani. Isenokuba ngabanye abantu abazama ukukuchaphazela ngenkohliso yakho.
Ipikoko emhlophe kunye nokuchazwa kwamaphupha.
Ukuba umntu ophuphayo ubona ipikoko emhlophe, kusenokubakho umntu obhinqileyo ebomini bakhe, amthembileyo, kodwa angakhohliswa ngubani. Kungenzeka ukuba lo mntu ufuna ukusebenzisa iindlela ezingenabulungisa ukuphikisana nempumelelo ayifumeneyo.
Uphawu lwephupha «ipikoko» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, ipikoko ithathwa njengophawu lokuchazwa kwephupha. mampunge. Iphupha lifuna impumelelo kunye nodumo, kodwa kuya kufuneka ulumkele ukufumana ukwamkelwa ngokunyaniseka kunokuthembela kwinkangeleko entle.
Kuba ipikoko ihamba ngokungabonakaliyo xa ivili lingajiki, uphawu lwephupha lunokutolikwa luthetha ukuba kukho into embi efihliweyo ngasemva kwento entle. Ukubona ipikoko ephupheni kufanele ukuba kube ngumhla ngaphambi kokutshata Ukubawa ilumkisa ngelithi abo baphupha bodwa abanakonwaba ngumdlalo onje. Oku kunokuqondwa ngokufuziselayo: umntu akufuneki ajolise kuphela kwimizamo yabo kwicandelo lezemali.
Ukuba ipikoko iyakhala ephupheni, iyaqondakala njengophawu lwabantu abakhohlakeleyo, ekufuneka amaphupha abo alumkele phambi kwabo, nokuba intle kwaye inomdla. Kukwasebenza kwaloo nto kwintsiba yepikoko. Iyafana nento engento kwaye isangaUkuba neentsiba zepikoko ephupheni kulumkisa abantu basetyhini ngokukodwa ukuba bangazibandakanyi neqabane elingalunganga eliqaqamba ngokubonakala.
Ukongeza intsingiselo yayo iphambili njengophawu lwenkangeleko entle, ipikoko inokucaciswa ngokwentsomi yayo. Kumaxesha amandulo yayiqwalaselwa njenge-phoenix, evutha esiphelweni sobomi bayo ize ivuke eluthuthwini. Ngale ndlela ikuqulatha Isiqalo esitsha.
Uphawu lwephupha «ipikoko» - ukutolikwa kwengqondo
Amampunge okanye ukufunwa rhoqo ukuqonda banokuba zizimpawu zoxinzelelo. Abo bathembela ngaphandle kuphela kwaye bafuna ukukhanya phambi kwabanye ngokulula bayalibala amaxabiso angaphakathi kwaye bangonwabi. Abantu balangazelela ukuthandwa ngokwenyani, hayi nje ukunconywa okuphezulu.
Itolikwe njenge-phoenix, ipikoko ibonisa isiqalo esitsha ephupheni. Mhlawumbi ukuphupha sele kudlule kwixesha elinzima, nangona kunjalo ngoku kuyaqala isigaba esitsha buzele bubomi nobuhle. Ukwi-wavelength efanayo nabathandekayo bakho kwaye ikamva likhanya ezinyaweni zakho. Kusenokwenzeka ukuba ulangazelela ukushiya yonke into ngasemva kwaye uqalele phantsi, kodwa abakulungelanga ukuthatha eli nyathelo.
Uphawu lwephupha «ipikoko» - ukutolika kokomoya
Ivili lepikoko lenza uphawu lwelanga ngokomoya. Umele uvuko kwaye ulwazi olukhuluukuba, njengepikoko, isuke ekubeni yintaka encinci eyingqondi iye ekubeni ngumntu omdala omhle.
Nangona kunjalo, kuxhomekeke kumxholo wephupha, ipikoko nayo inokuqhubela phambili kwinqanaba lokomoya. mampunge ukulumkisa.